Tsy Miraharaha Ny Fanoherana Mivaivain’ny Vahoaka Ny Governemanta Jordaniana, Nosoniaviny Ny Fifanarahana Entona Miaraka Amin’i Israely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 8:57 GMT
Hetsi-panoherana any Amman, ampahan'ny hetsika nasionaly nataon'ireo mpikatroka mafana fo, sendikà, ary fikambanana, ary ireo antoko politika ihany koa, hanatsaharana ny fifanarahana entona eo amin'i Jordania sy Israely. Loharano: Khaled Al Shakaa tao amin'ny Twitter.
Ny 26 Septambra 2016, nanambara ny orinasa Noble Energy Inc. mitoetra any Houston, fa nanao sonia fifanarahana izy sy ny fivondronamben'ireo kaompanian'angovo mba hamatsy entona natoraly avy amin'ilay toerana misy entona natoraly Leviathan, bodoin'i Israely ho an'ny National Electric Power Company Ltd. (NEPCO) (Orinasa Nasiônaly Mpamokatra Herinaratra), izay an'ny governemanta Jordaniana manontolo. Nifanehatra tamin'ny fanamelohana sy fanoherana mivaivain'ny vahoaka Jordaniana ilay fanambaràna, vahoaka izay mbola tena manohitra be ny endrika rehetra ho fampanarahana fenitra ny zavatra iarahana amin'i Israely, na efa roapolo taona aza izay no lasa hatramin'ny nanaovana sonia ny Wadi Araba, fifanarahana fandriampahalemana teo amin'ireo firenena roa tonta.
Nilaza ilay Jordaniana mpanoratra, Samar Saeed, fa manao ireo olon-tsotra rehetra ho toy ny mpiray tsikombakomba amin'ireo adin'i Israely io fifanarahana io.
Amin'ny fanaovanana sonia io fifanarahana entona io, ataon’ ny fitondrana Jordaniana ho lasa mpanaiky ara-dalàna ireo olon-tsotra rehetra. Lasa hanampy ara-bola ireo ady hoavy aoriana isika. Tsy afaka miaina amin'izany #غاز_العدو_احتلال izahay
Nolazain'ilay fivondronamben'ny angovo ho “manan-tantara” ilay fifanarahana, manatanteraka ny fanirian'i Israely hatramin'ny 2010 nahitany ilay toerana misy entona mba ho lasa mpanondrana entona natoraly. Hanampy an'i Israely hamerina ny vola lany tany am-boalohany nanitarana ny saha Leviathan io. Araka ny ambaran'i Amit Mor, mpanolo-kevitra momba ny angovo “Tena zava-dehibe tokoa amin'ny filaminam-pirenenan'i Israely ny fandrosoan'ny tetikasa Leviathan, firenena izay maka ny entony rehetra avy amin'ny toerana tokana ankehitriny, ny saha Tamar. Noho izany, tena tsy maintsy ilaina ny fanitarana ny isan'ny loharano fakàna entona, ary ny làlam-barotra Jordaniana no afaka anaovana izany.”
Tsy io no fifanarahana entona natoraly teo amin'i Israely sy Jordania. Ny volana Febroary 2014, nanao sonia fifanarahana tamin'ireo kaompania Jordan Bromine sy Arab Potash mitentina 500 tapitrisa dolara i israely, hamatsiana entona 1.8 BCM avy tamin'ilay sahan'entona Tamar, eny amin'ny manodidina. Samy halan'ireo Jordaniana ireo fifanarahana roa ireo, indrindra teo amin'ireo manohitra ny fampanarahana fenitra sy ireo hetsika BDS. Nasehon'ny ny fitsapankevitra nataon'ny fandaharana fahitalavitra Jordaniana iray, Ro'ya, ny volana Febroary teo, fa 90 isan-jaton'ireo namaly no tsy nankasitraka ny fanafàrana entona avy any Israely.
Notsipihan'ny fitsapankevitry ny Nabd Al Balad natao ny Febroary fa 90 isan-jaton'ireo Jordaniana no manohitra ny fifanarahana entona ifanaovana miaraka amin'ny fahavalo
Ny Hetsika Nasionaly natao Hamadihana Ilay Fifanarahana Entona Miaraka amin'ny sampana Siônista, fivondronan-kerin'ireo mpikatroka mafana fo, sendikà, antoko politika, ary mpikambana teo aloha tao amin'ny parlemanta nitsangana ny volana Janoary 2015, dia nitarika ny fanoherana nasionaly an'ilay fifanarahana entona, miaraka amin'ny tenifototry ny hetsika hoe #غاز_العدو_احتلال, izay midika hoe “Ny Enton'ny Fahavalo dia Fibodoana.” Nanao “fitsaram-bahoaka” ilay hetsika tamin'ny voalohandohan'ity volana ity, miampanga ny governemanta sy ireo orinasa tafiditra amin'io ho mampidi-kizo ny filaminam-pirenena ary manohana ny fampihorohoroan'ny Siônista.
Sary sy Lahatsary: Manao fitsaram-bahoaka amin'ilay fifanarahana entona miaraka amin'ny Sampana Siônista ny Hetsika Nasiônaly natao Hamadihana Ilay Fifanarahana Entona
Ho valinkafatr'ilay fanambaràna fifanarahana vao navoaka, namoaka fanambaràna entitra ilay hetsika, izay nitaraina tamin'ny fanapahankevitry ny governemanta hiroso amin'ilay fifanarahana na eo aza ireo fanitsakitsahana mitohy ataon'i Israely amin'ireo Fifanarahana Filaminana ny taona 1995. Notohizan'ilay hetsika tamin'ny antso hanaovana hetsi-panoherana ny Zoma 30 Septambra, izay vinavinaina ho ny hetsika Zoma voalohany goavana eny amin'ny làlan'i Jordania hatramin'ireo fitroarana ny taona 2011-12.
Ireo mpikarakara ny hetsika ihany koa dia nanohana ny antso nataon'ny Herak Shababi, hetsiky ny tanora izay navitrika hatramin'ireo fitroarana ny taona 2011-12, izay nanao fitorevahana ny Talata hariva teny anoloan'ireo foiben'ny NEPCO. ِNahavita nisarika mpandray anjara maherin'ny 200 isa tao anatin'ny fotoana fohy ilay fitorevahana, nialohan'ny nanaparitahana azy tamim-pilaminana narahana antso hiverina eny an-dàlana ny Zoma:
Hiredona mafy araka izay vitanay izahay, tsy misy fibodoana, tsy misy fanerena ho fampanaraham-penitra ary tsy misy fandriampahalemana mandra-piverin'ireo zo.
Nipetraka taminà lahatsoratra ho an'ny 7iber, nilaza izao ilay Jordaniana mpanoratra, Hisham Bustani, “Tsy mila manafatra entona avy any Israely i Jordania, sady amin'izay indray, tsy ato ho ato no ilany mitady vahaolana fanolo, araka ny faneken'ny fanambaràna an-gazety nataon'ny governemanta, mbola voaantoky ny fanafaranantsika avy amin'ny sehatra entona solika mitsiranoka nisokatra tamin'ny taona lasa any Aqaba, ny filàn'i Jordania amin'ny resaka angovo.” Nampiseho ny karazana tetikasan'angovo fanolo hafa nataon'i Jordania tao anatin'ireo taona vitsivitsy lasa, izay mety ho afaka hanarona tsara ny filàn'i Jordania amin'ny resaka angovo, i Bustani.
Nibitsika ihany koa i Safa’ Al Jayousi, manampahaizana amin'ny tontolo iainana sady mpisolovava, mikasika ireo loharanon'angovo azo havaozina mety ho afaka ampiasain'i Jordan.
Afaka mamatsy an'i Jordania 60 avo heny amin'ny filàny amin'ny herinaratra, amin'ny taona 2050, tsy misy fifanarahana, ireo loharanon'angovo azo havaozina—indrindra ny masoandro.
Nametra-panontaniana tamin'ny fotoana nanaovana ilay fifanarahana ihany koa i Bustani, izay nambara andro vitsivitsy taorian'ny nanaovan'i Jordania ireo fifidianana nasiônaliny, ary iray andro taorian'ny nametrahan'ny governemanta amperinasa ny fialàny, namela ireo sampan-draharaha ho tsy nisy tomponandraikitra tamin'ilay fifanarahana.
Nibabababa tamin'ny fihatsaràm-belatsihin'ilay fifanarahana izay nitranga haingana loatra taorian'ireo fifidianana ihany koa ilay Jordaniana mpanoratra , Bara’ Hasaniya.
Ahoana no afaka mamitaka antsika izy ireo, mba hinoantsika ny demokrasia ato amin'ny firenena, raha izy ireo aza tsy miraharaha ireo fangatahan'ireo an-tapitrisany mpiray firenena aminy tsy hanao sonia ny fifanarahana miaraka amin'ny fahavalo.
Nampiseho ny fianjonanjonany ilay mpampiasa Twitter, Anadareee, hoe dila akory ny roa herinandro taorian'ny nitifiran'ny hery Israeliana ho faty an'i Said Al-Amro, Jordaniana 28 taona avy any Al-Karak, dia tonga ny fanaovana sonia ilay fifanarahana.
Soraty tsara ilay daty 26-9, androany, nataontsika sonia niaraka tamin'ny fahavalo Siônista ny fifanarahan'ny henatra sy fahababoana, raha mbola tsy mangatsiaka akory ny ràn'i Al-Amro.
Naneho ny ahiahiny ilay Jordaniana mpanoratra, Jaber Jaber, mikasika ny governemanta izay hiditra amin'ny fanivanana mba hamerana ny fandrakofan'ny media ilay fifanarahana, miresaka ny fironan'ny governemanta hamoaka matetika didy mba hanginan'ireo media, izay notaterin'ny Global Voices Advox teto vao haingana.
Tsaratsara kokoa raha manoratra haingana momba ilay fifanarahana entona nifanaovana tamin'ny Siônista fahavalo ianareo, mialohan'ny hamoahan'izy ireo didy hanginana.
Kely ihany ny finoana hoe hiverin-dàlana amin'ny heviny i Jordania mikasika ilay fifanarahana, noho ny lanja stratejikany ho an'ireo firenena mpiara-dia, izay Etazonia sy Israely.
Miaraka amin'ny nahitàna'i Ejipta ny tetikadiny manokana momba ny tahirin'entona, ary ny ambin'ny faritra tafiditra anatin'ny ady, mamela an'i Jordania ho hany mpividy azo antoka ho an'ny Leviathan io. Hanokatra làlana amin'ny mety hisian'ny fifanarahana entona miaraka amin'i Torkia, izay mila mamaha ny fifandirany ara-politika miaraka amin'i Cyprus aloha, mialohan'ny hahafahana manao fifanarahana, ny fampandrosoana ilay saha stratejikan'ny entona. Hanapaka ny fanaovan'ny Rosiana ampihimamba ny entona natoraly any Eorôpa io, izay hampisinda ny fiasan-tsain'ny maro, izay i Etazonia sy ireo namany manerana an'i Atlantika, ary koa handamina ny ara-toekarena sy ny filaminan'i Israely ihany koa, amin'ny fanaovana poa-droa hahavoa vorona roa aminà vato iray monja.
Hasehon'ny valin'ilay hetsika ny Zoma 4 Oktobra, raha toa ny fitondràna Jordaniana hahavita hiatrika ny fanoherana mivaivay voalohany avy amin'ny vahoaka sy hsampilefitra ny fanoheran'ny ao an-toerana ilay fifanarahana.